Xafiiska Horumarinta Manaahijta - Wikipedia
Xafiiska Horumarinta Manaahijta Soomaaliya
مكتب تطوير المناهج
Somali Curriculum Development Office
Muqdisho iyo Hargaysa
Wasaarada Waxbarashada Soomaaliya
Barta laga soo xigatay
Xafiiska Horumarinta Manaahijta (Af Ingiriis : Somali Curriculum Development Office; Af carabi: مكتب تطوير المناهج) waa xafiiska qaabilsan dejinta iyo horumarinta manaahijta Waxbarashada Soomaaliya taasi oo hoostegta Wasaarada Waxbarashada.
Dugsiyada hoose, dhexe iyo sare waxay badiyaa ku tiirsanyihiin laantan oo ah laan ka mid ah laamaha wasaarada waxbarashada ee dalka. Guddi farsamoyaqaano ayuu ku bilowday Xafiiska Horumarinta Manaahijta. Gudigan wuxuu shaqada ka dhaxlay Guddiga Af Soomaaliga oo 15 sano gudiaan hortiis la aas aasay.
Xafiiska Horumarinta Manaahjita ee Soomaaliya waxaa hirgaliyay Dawladii Kacaanka ka dib markii la qoray afkeena hooyo Af-Soomaali sanadkii 1972. Maamulkii daakhiga 1950kii ilaa calanka la taagay Luulyo 1, 1960, waxaa xafiisyada wadanka lagu maamulayay afaf qalaad sida Af-Ingiriis iyo Af-Taliyaani wax manhaj ah oo is waafaqsana dalka kama jirin.
Jaamacada Ummada oo dhidibada loo taagay sanadkii 1954 ma lahayn manhaj Af Soomaali ah oo ka tarjumayo hidaha, taariikhda iyo dhaqankeena wanaagsan iyo kan nolosha dhaqandhaqaale ee sooyaalka soo ahaa qarniyo badan miyi iyo magaalaba.
1 Wasaarada Waxbarasahada iyo Madbacada Qaranka
2 Tacliinta Sare sida Kulliyadaha iyo Jaamacadaha
3 Gudiyadii Af Soomaaliga iyo Gudigii Xafiiska Manaahijta
4 Xubnaha Xarunta Horumarinta Manaahijta
5 Dugsiygada Hoose Dhexe
6 Dugsiyda Sare Caadiga
7 Wasaarada Waxbarashada iyo Wasaarada Hidaha iyo Tacliinta Sare
Wasaarada Waxbarasahada iyo Madbacada Qaranka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Wasaarada Waxbarashada iyo Barbaarinta oo kaashanaysa khuburo Soomaaliyeed oo afkeena ku xeeldheer ayaa dejiyay manhajkii ugu horeeyay sanadkii 1973 iyaga oo ka bilaabay ururinta dhamaan xogta ku taxluqda wax walba oo Soomaali ah.
Guddiga Af Soomaaliga oo iyagu howlgalay sanadkii 1961 oo labo jeer warbixin soo bandhigay ma dhicin in lagu tilaaboqaado taladoodii iyo xogtii ay heleen; baaristii hore ee gudiga waxaa howlgaliyay oo kharashaadkooda daboolay dowladii Madaxwayne Aadan Cadde (AUN), markii labaadna ha'ada Qaramada Midoobay ee UNICEF. Qorista Af Soomalaiga iyo guntii kale ee laga lahaa howsha gudiga ma hirgeliin labada jeerba. Markii sadexaad waa markii Dowladii Kacaanka ee uu hogaaminayay Madaxwayne Maxamed Siyaad Barre (AUN) waana la meelmariyay himiladii laga lahaa howsha Gudiga Af Soomaaliga.
Waxaa la qoray buugaag iyo qaamuus iyada oo loo gudbay abuurista gudiyo kale iyo aas aaskii Wakaalada Madbacada Qaranka oo door wayn ka ciyaartay. Buugag badan oo Af Soomaali ku qoran ayaa la daabacay ururin qotodheer iyo diyaarin fog ka dib. Waxaa buugaagtaas ka mid ahaa kuwo lagu ururiyay hidaha dhaqankeena, Sheekooyin, maahmaaho, tacliinta dugsiyada aas aasiga iyo kuwa sare.
Tacliinta Sare sida Kulliyadaha iyo Jaamacadaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
In kasta oo Jaamacada Ummada iyo kuliyadaheeda sida Gaheyr, Lafoole iyo dhamaan xarumihi kale ee tacliinta sare sida Machadka Siidam kuliyadihii beeraha ee Afgooye iyo Jowhar iyo dugsiyadii farsamada ee Hargeysa, Burco iyo xarumihii mashaariicada iyo warshadaha Kismaayo, Jowhar iyo Balcad ay ku bixi jiriin afaf qalaad ilaa berigii dambe la diyaariyay buugaag shaqaalaha loo tarjumay.
Dhamaan degmooyinka wadanka Boorame, Baardheere ilaa Badhaadhe waxaa laga dhigi jiray dugsiyada sare buugaag aad loogu bogay oo la oran jiray Suugaan ama Af Soomaali. Barashada Suugaanta Soomaaliyeed waxaa lagu bilaabi jiray fasalka 7aad ilaa iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare. Gabayada, maamaahaha, sheekooyinka iyo murtiada kale ee ku qoran buugaagtaas waxay dhisi jirtay ardayda iyaga oo barbaarin afkooda hooyo ka heli jiray. Macalimiin tayo leh oo gaarsiiya ardayda howraar wanaaga afkeena, qorista tuducyo xiiso leh iyo curisyo wanaagsan oo tartan loo galo ayay ardayda ka qay qaabadan jireen xili dugsiyeed walba.
Qoristii Af Soomaaliga waxaa lagu baran jiray goobaha tacliinta ee dalka oo tirada ardayda lagu qiyaasay in ka badan 60,000 iyo 7,000 sanad walba; dugsiyada sare iyo kuliyadaha/jaamacadaha, siday iskugu xigaan. 
Gudiyadii Af Soomaaliga iyo Gudigii Xafiiska Manaahijta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Gudigii Far Soomaaliga ama Af Soomaaliga sanadadii ugu firfircoonida banaa waxay ahaayeen 1973 ilaa 1984. Tirada iyo tayada xarumaha waxbarashada Soomaaliya waxay gaareen heer ha'adaha u ole oleeya waxbarashada iyo sare u qaadida tayada waxbarashada caruurta, dadka waaweyn iyo xirfadlayaasha bulsho waxay bixiyeen bilada iyaga oo Soomaaliya ku amaanay dadaalkeeda dhanka waxbarashada bulshadeeda.
Wadamada Afrika ee aan dariska nahay sida Tansaaniya waxaa laga hayaa inuu Madaxwayne Nayeeri uu yiri,"Soomaali waxaan hadal ku haynay howl ahaan u qabtaan." Waxaa taas labeeyay UNICEF oo sanadkii 1986 ku xaqiijisay Ol olaha Horumarinta Reer Miyaga inuu tirada bulsahda ee wax qorta akhrisana ay gaartay 55% halka ol olaha ka hor ay taagnayd agagaarka 2-5% tirada guud ee bulshada Soomaaliyeed.
Dhamaan degmooyinka wadanka tiradooda 91 ama wax la mid ah waxaa laga hirgaliyay dugsiyo sare kuwaas oo qalin jabin ka dib ku shaqayn karay aqoonta Af Soomaaliga ay ku barteen dugsiyada heerka hoose/dhexe ilaa sare ahaa. Ardayda waxay xisaab, Af Soomaali iyo maadooyinka sayniska intaba ku qaadan jireen Af Soomaali yada oo Af Carabi laga dhigay afka labaad ee sida joogtada ah uga baxa xiidaha dugsiyada dhexe iyo sare. Barashada Siirada Nebiga CSW waxaa lagu bilaabi jiray fasalka 6aad.
Guddiga Af Soomaaliga iyo Guddigii Horumarinta Manaahijta waxay soo hoyeen guulo waaweyn iyada oo maanta Af Soomaali uu yahay afka 3aad ee si baaxad leh loo horumariyay qaarada Afrikana kaga jira kaalin mug weyn. Af Carabi iyo Af Hawsa oo wadanka Nayjeeriya looga hadlo ayaa ah labada af ee kale ee qaarada ugu horumarsan.
Xubnaha Xarunta Horumarinta Manaahijta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Guddiga Xarunta Horumarinta Manaahijta waxaa la aas aasay markii afka la qoray 1972, durbadiiba si loo bilaabo ururin, qoris iyo baahinta suugaanta iyo iyo habka nolol dhqandhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed. Xafiiska iyo baarayaashii taariikhda iyo suugaanta Soomaaliyeed waxaa kaaliyay in ka badan dhowr boqol oo hobal (abwaano), qoreyaal, farshaxano, taariikhyahan, la taliyeyaal farsamo oo hobalo rag iyo dumar leh iyo kumanaan shaqsi oo Soomaaliyeed kuwaas oo laga helay xog wax ku ool ah.
Manhajka ay wasaarada Waxbarashada iyo Barbaarinta dajisay ee lagu daabacay Madbacada Qaranka waxay ka koobnaayeen sheekooyin, maahmaahyo, maanso (gabayo, buraanbur iwm), curisyo iyo heeso, waxaana buugtaas ka mid ahaa: Suugaanta Xarunta Horumarinta Manaajita diyaarisay way badnayd waxaase lagu bilaabi jiray:
Dugsiygada Hoose Dhexe[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Fasalka Afraad Af Soomaaliga
Fasalka Shanaad Af Soomaaliga
Fasalkaa Lixaad Af Soomaaliga
Fasalkaa Todobaad Af Soomaali iyo Suugaan
Fasalka Sideedaad Af Soomaali iyo Suugaan
Dugsiyda Sare Caadiga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dugsiyada Sare ee Caadiga, iyada oo dugsiyada sare ee farsamada, caafimaadka, beeraha, badda iyo xisaabaadka badiyaa afaf qalaad lagu dhigan, ma jirin Af Soomaali iyo Suugaan saas u balaaran oo lagu qaadan jiray.
Maadooyinka dugsiyada sare ee caadiga dhamaan waxay ku bixi jireen Af Soomaali kuwaad oo laga bari jiray ardayda manaahij diyaarsan oo qoran si lixaad lehna loo ururiyay kuwaad oo daboolay baahidii taariikhda, hab dhaqandhaqaale bulsho, iyo maadooyinka sayantiifiga ah sida Saynis, xisaabaha, Alkiimiya (Kimisteri) Fiisigis iwm.
Fasalka Koowaad Suugaan
Fasalka Labaad Suugaan
Fasalka Saddexaad Suugaan
Fasalka Afraad Suugaan
Wasaarada Waxbarashada iyo Wasaarada Hidaha iyo Tacliinta Sare[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Labada wasaaradood ee waxbarashada xil ka saarnaa howl culus ayay qabteen mudo gaaban gudaheed. Idil maadooyinka dugsiyada hoose, dhexe iyo sare waxaa jiray manhaj haqabtiran oo Af Soomaali ku bixi jiray. Xarunta Horumarinta Manaahijta iyada oo kaashanaysa Wakaaladda Madbacadda Qaranka waxay dhamaan maado walba ka diyaarisay oo u daabacday buugaag dugsiyada hoose, dhexe, sare iyo kuwa waxbarashada dadka waaweyn. Ilaa 400 oo ciwaan in ku dhow ayay Wakaaladda Madbacadda Qaranka soo saartay 1972-1990.
Buugaagta sida baaxada leh loo daabacay waxaa ka mid ah maadooyinka Af Soomaali, Suugaan, Taariikh, Juquraafi, Saynis, Fisigis, Kimistari,Bayoolaji, Xisaab, iyo habka qoraalka iyo Naxwaha Af Soomaaliga oo ay qoreen Shire Jaamac Axmed iyo Maxamed X. Xuseen Raabi.
Jaamacada Ummada laftigeeda waxaa ka bixi jiray tacliin sare oo Af Soomaali ah-gaar ahaan Kulliyada Lafoole oo diyaarin jirtay macalimiinta qaranka. Maadooyinka taariikh, juquraafi iyo dhamaan maadooyinka sayantiifiga ah Af Soomaali ayay ku bixi jireen. Maadooyinka Af Soomaali iyo Suugaan waxaa ka qornaa buugaag lala dhaco. Jaamacada Lafoole waxaa 1976 lagu diyaariyay buugii halbeega qorista Af Soomaaliga oo uu qoray barre sare Maxamed Xaaji Xuseen Raabi, buugaas oo ahaa Habka Qorista Af Soomaaliga, Xamar, Madbacada Qarana,1977. Shire Jaamac Axmed iyo Maxamed X. Xuseen Raabi.
Gudoomiyeyaal dhowr ah ayaa xilka ugu sareeya qabtay Xarunta Horumarinta Manaahijta waxayna kala ahaayeen iyada oo sanadadii ay xilka hayeen laga tixraacay buugaagta daabacan waana la sixi karaa cidii xog sugan hayso:
Jaalle Cabdiraxmaan Timir Cali 1972-1973
Bashiir Faarax Kaahiye 1974-1977
Xasan Daahir Obsiiye 1977-1990
Xarunta Horumarinta Manaahijta howlo badan ayay u qabteen bulshada Soomaaliyeed waayahan iyo jiilasha dambe, horumar laxaad lehna way gaarsiiyeen kobcinta Af Soomaaliga. Waxaa xafiiska gudoomiye u ahaa mudo dheer Xasan Daahir Obsiiye-iyada oo aan diiwan laga hayn marxaladihii iyo aas aaskii guddiga. Xubnaha guddiga oo shaqooyin badan soo qabtayna waa kuwan diiwaankoodii.
↑ Barta internetka ee Baardheere.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xafiiska_Horumarinta_Manaahijta&oldid=167633"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Maarso 2017, marka ee eheed 18:20.